के हो विवाह गर्नुको उद्देश्य ? « Lokpath
२०७७, २३ पुष बिहीवार २०:३३
के हो विवाह गर्नुको उद्देश्य ?
प्रकाशित मिति : २०७७, २३ पुष बिहीवार २०:३३
काठमाडौं । विवाह एउटा महत्वपूर्ण संस्कार हो । यो संस्कार कुन उद्देश्यले गरिन्छ भन्ने कुरा बुझेर संस्कारका कर्महरुको अनुष्ठान गर्दा विवाह संस्कारको गरिमा बढ्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन । यहाँ उक्त संस्कारका केही उद्देश्य निरुपण गरिँदैछ ।